Bato reSACP rekuSouth Africa Rinoti muZimbabwe Mune Dambudziko, Kunyange Hazvo Zanu PF iri Kuramba
Vakafanobata chigaro chemutauriri qweZanu PF, VaPatrick Chinamasa vakati Zimbabwe haisi dunhu reSouth Africa.
Bato reSouth African Communist Party, SACP, rekuSouth Africa mukupera kwesvondo rakazivisa kuti muZimbabwe mune matambudziko anoda kutariswa nekukasika, ayo rinoti ari kubatawo South Africa.
Vachitaura mushure memusangano weCentral Committee yebato ravo muJohannesburg, munyori mukuru webato iri, VaBlade Nsimande, vanove zvakare gurukota rezvedzidzo, vakati kuramba kuti muZimbabwe hamuna matambudziko kuzvinyepera pachitariswa huwandu hwevana veZimbabwe vari kuvaka misasa munyika iyi.
Asi vakati vana veZimbabwe ndivo chete vanofanirwa kugadzirisa matambudziko ari munyika yavo.
Mashoko ebato reSACP aya anouya panguva iyo bato reAfrican National Congress, ANC, rakabva kutumira chikwata kuZimbabwe chaitungamirwa nemunyori mukuru webato iri VaAce Magashule kuti chinonzwisisa nezvematambudziko anonzi akatarisa nezimbabwe.
Hurumende pamwe nebato reZanu PF vagara vari kuramba kuti munyika hamuna matambudziko, kunyange hazvo vanopikisa pamwe nemamwe masangano akazvimirira vari kuti munyika mune matambudziko.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weZanu PF, VaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe harisi dunhu reSouth Africa, nekudaro nyika iyi inofanirwa kusiyana netsika yekuisa mhino dzayo munyaya dzeZimbabwe.
VaChinamasa vakapomerawo hurumende yeSouth Africa kuve pasi pevachena.
Studio 7 yaedza kunzwa divi reZanu PF pamusoro pemashoko ebato reSouth African Communist party aya, asi sachigaro veZanu PF mudunhu reSouth Africa, VaKenneth Mandaza vavimbisa kuzopindura mibvunzo yedu nemusi weMuvhuro.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reFastforward Community Development Centre, VaAkson Potera vanoti hazvishamise kuti munyori mukuru weSACP, VaBlade Nsimande vakataura kuti muZimbabwe mune dambudziko nekuti vakaona kuti mune dambudziko.
Vanoti VaNsimande munhu akanzvera mabhuku zvakanyanya zvekuti vanogona kuve nemaonero akasiyana kubva kune vamwe.
Hurukuro naVaAkson Potera